Daawwitiin waan gara fulduraatti ta'u akka mul'isu beektuu? - BBC News Afaan Oromoo
Daawwitiin waan gara fulduraatti ta'u akka mul'isu beektuu?
Goodayyaa suuraa Daawwitiin maddawwan dinqisiifannaa walfakkaatu qabu
Daawwitiin haala dinqisiisaafi nama harkisuun baayyee keenya kan harkiisuudha. Namnmi daawwitii keessatti ofi ilaalu jibbbu jira jechuun ni ulfaata.
Fakkii keenya isa namoonni gara biraa ilaalan arguun kan danda'amu daawwiitii qofaan waan ta'eef carraa kana calisanii darbuun ulfaataa ta'a.
Daawwitii ''haaluma namoonni biraa nu arganiin akka of agarruuf'' carraa nuuf kenna. Akkasumas fuula bareedaa keenya, haasawaa barbaachisaa keenya akka itti gammadnu nu taasisa.
Daawwitiinis dhimmoota armaan olitti eeramanii alattis bu'aalee biraa irra olaa turuu maddeen ni mul'isu.
Daawwiitii ilaalchisee dhugaawwan saddeeti kunooti:
1. Gara fuula duraatti waa baruuf
Goodayyaa suuraa Maal arguu dandeessa?
Bara durii Giriikiitti, hoogganaan amantaa (falfaltoonni Thessaaly) heddumminanaan daawwitiin fayyadamuun raagaa akka turan himama. Dhooga looniitti fayyadamuunis daawwitii irratti seeroota barreessa akka turan himama.
Warra Romaa durii birattis daawwitiin tajaajila walfakkaataaf akka dhimmi itti bahamu dubbatama. Luboota Warra Roomaa durii birattis akkasuma daawwiitiin bara darbe, kan ammaafi isa gara fuula duraa ilaaluuf akka itti fayyadaman maddeen ni mul'isu.
2. Addunyaa biraa waliin walitti dhufuuf
Goodayyaa suuraa "Daawwitiin aaruu'' addunyaa lafa jalaatiif karaa gabaabaa beeku ...
Bara kana keessa daawwitiin daakuu almuniyamii irraa kan hojjatamu yoo ta'u, warri Masirii garuu madaabii qulleeffame irraa hojjatutti fayyadamu turan.
Madaabiinis waaqoota Hathor kan dubartiidhaan fakkeeffamuudhaan bareedina, jaalala, dhala godhachuu fi quunnamtii saalaaa akkasumas falfala walitti hidhamuun walitti fakkeeffama.
Warren ''Tezcatlipoca '' ammoo waaqoolii alkanii, yeroo fi kan yaadannoo dhaloota ilmaan namaa ture. Innis qarqara dachiitii fi addunyaa jalaaf daawwitiitti fayyadama ture.
3. Madda humnaa
Goodayyaa suuraa Daawwiitiiwwan osoo umama dhugaa waan isaan fulduratti argamanii kan mul'isan ta'ee maaltu umamau malaa?
Biyya Chaayinaatti, daawwitiin ifa, yeroo hedduus kan addeessaa qabachuu dhimmi akka itti bahamu dubbatama.
''Haa ta'u malees, mootiiwwan keessaa abshaalli tokkoos 'daawwitii moraatti' fayyadamuun dhugaa qabeessummaa namootaa ittiin baruuf fayyadamaa ture.''
Qin Shi Huang, jaarraa 25 (AD) keessa mootiin jalqabaa Qin Dynasty, namoonni daawwitii keessatti yoo of ilaalan eenyummaa dhugaasaanii ni mul'isa jechuun hordoftoota hedduu horatee ture.
4. Daawwitii dhugaa himu
Goodayyaa suuraa Hunda caalaa eenyutuu bareedaa?
Daawwitiiwwan akka waan isaan fuulleetti argamu qabachuun keessoo isaaniitti kuufataniitti booda dhimma itti bahaniitti amanama ture. Kunis ogummaa daawwitiin 'Snow White' beekamaaf ka'uma akka tureetti amanama.
Yaadni 'Snow White' dhugaas kan Bavarian Baroness isa jaarraa 18ffaa fi kan abbaan ishee bara 1743 keessa lammaffaa fudhee akka taatee amanama.
Haatii buddeenaa haaraanis, kan ijoolleeshii kan gaa'ila duraa caalaa kunuunsituus, abbaa warraa ishee haaraadhaan daawwitiitu akka kennaatti kennameefi.
Daawitichis akka 'daawwiitii dubbatuu' (Talking Mirror) fi kan Naannoo Bavarian Lohr Jarmanii bara ammayyaatiin hojjatameetti ibsamee ture. Kanaafuu akka daawwiitii 'isa yeroo hunda dhugaa dubbatuutti' amanamaa ture.
Daawwitiin dhugaa jiddugala yaada hawwii kanaas har'ailleen Muziyeemii Spessart kan Masaraa Lohr keessatti hana har'aatuu ni argama jedhama.
5. Amantaawwan daawwitiin walitti hidhaman
Goodayyaa suuraa Kunis carra dhabummaadha
Daawwitii cabsuun walqabatee amantaa gaariifi badaa hedduutuu addunyaa hundarratti argama.
Haala amantaa warra Romaa duriitti namni tokko daawwitii yoo cabsee waggoota ittaanan torbaaf haalli gaariin akka isa mudatu amanama. Sababiin waggoota torba itti ta'ees, jireenyi ilmaan namaa waggaa torba torbaan akka geedaramu waan amanamamuuf.
Kanaafuu cacabaa daawwiitii walitti qabuun dhiyaachuu ykn gara lagaatti darbachuun carra hamaa akka hambisuu amanu.
Biyya Paaksitaaniitti ammoo daawwitii cacabsuun akka waan afuura hamaa harii'uutti fudhatama. Wayita dawwiitiin cabu afuurri hamaan mana keessa ture battalumatti dhiisee bada jechuudha.
6. Daawitii garagalchuu
Biyya Inglizii dabalatee amantaan baliinaan amanamu tokko biyyoota addunyaa heddu keessatti jira. Kunis namni tokko du'aa yoo sirni awaalcha isaa raawwatamu, daawwitiiwwan mana keessa jiran hundi garagalfamuun akka ka'aman taasifamau.
Kunis kan taasifamuuf, lubbuun ykn nafseen mana du'ee sun daawwitii keesatti qabamte turti jedhamee waan amanamuufiidha. Gochi kunis biyya Ameerikaa, Chaayinaafi Maadaagaaskaar fi Ruusiyaattis ni mul'ata.
Biyyawwan barmaati kun hanga ammaatti itti dhimma bahamu keessaa Israa'eel, ni eeramti. Sirna torbaniif mana keessa turuunis daawwitiiwwan mana keessatti argaman hundi garagalfamanii ykn faggeeffamanii akka olkaa'an taasifamu.
7. Eenyummaa sirrii
Haala aadaalee durii tokko tokkootti, dawwitiin eenyummaa dhugaa waan tokko mul'isuuf dandeettii akka qabutti amanama.
Akka amantaa warra duriittis kanneen dhiiga ilamaan namoota xuuxan 'Vaampaayar' jedhamuun kan beekaman lubbu waan hinqabaanneef, daawwitii biraa dhaabbatan illeen calaqeen isaanii deebiisanii daawitiin arguun hin danda'amu jedhamee amanama.
Kanaafuu, yeroo itti aanuu daaawwitii keessatti of ilaaluun maal akka deebiisee isiin ilaalaa jiru hubadhaa!